Sida loo Copy Lugood playlist in an External Hard Drive
Sida loo Copy Playlists Lugood in an External Hard Drive
> Resource > Lugood > Sida loo Copy Playlists Lugood in an External Hard Drive
"Ma waxaa jira hab lagu nuqul ka playlists Lugood in drive dibadda adag gabayo? Waxaan jeclahay music oo ay abuuraan daraasiin playlists on Lugood. Tan iyo markii aan Lugood degan meel aad u badan, waxaan u baahan tahay inaad nuqul ka guuraan qaar ka mid ah playlist Lugood in an drive dibadda adag . baryayaaye, i sii talooyin, fadlan. "
Ma aqaano haddii aad isku daynay in aan koobi playlists Lugood in drive dibadda adag ama aan. Threads internetka badankoodu waxay kuu sheegi doonaan si ay u gudbiyaan .xml file Lugood playlist si aad u computer. Haddii aad wareejin Lugood file playlist .xml in aad baabuur dibadda u adag, waxaad ka heli doontaa in aysan jirin music galka ah oo dhan, laakiin kaliya file .xml. Qaadashada ammaanka aad playlists Lugood tixgelin, waa in aad si drive dibadda adag wareejiyo playlists Lugood gabayo waxa ku jira. In this article, waxaan idin ​​bari doonaa sida loo isticmaalo Wondershare TunesGo in aad nuqulka Lugood playlist in drive dibadda adag gabayo.
Download version tijaabo ah TunesGo!
Wondershare TunesGo (Windows) waxaa loogu talagalay Windows PC. Waxaa si fiican u shaqeeyaa PC orodka ee Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows XP, iyo Windows Vista. Hel version maxkamad your computer iyo Raac tallaabooyinka hoose si aad u barato sida loo nuqul ka Playlists Lugood in an drive dibadda adag. TunesGo taageeraa oo dhan macruufka qalabka socda ee macruufka 9, macruufka 8, macruufka 7, macruufka 6 iyo macruufka 5.
Tallaabada 1. nidaameed Lugood music qalab macruufka ah
Marka hore oo inta badan ka, fadlan u hagaagsan Lugood playlists in aad rabto in aad nuqul ka si ah drive dibadda adag tahay in mid ka mid ah qalabka macruufka aad. Connect qalab macruufka la computer iyo Burcad Lugood. Guji View> Show galeeysid. Riix qalab macruufka on galeeysid ka tegey oo Music tab on sare ee daaqadda. Dooro playlists doonayay oo iyaga u hagaagsan in aad qalab macruufka ah. Markaas furaysto in aad gaari ku adag dibadda si ay u computer.
Tallaabada 2. Run TunesGo
Jooji Lugood marka hore ka dibna ay maamulaan MobileGo ee macruufka on your computer. TunesGo aqoonsan doonaa iPhone si degdeg ah oo ay muujiyaan in uusan xirmin suuqa ugu weyn. Laga soo bilaabo suuqa kala tagay, waxaad ka arki kartaa shay sida 'playlist' magacaabay.
Tallaabada 3. Nuqul Lugood playlists in drive dibadda adag
Riix ah 'playlist' u muujiyo oo dhan playlists Lugood in youc've synced in aad qalab macruufka ah. Dooro playlists doonayay oo guji saddexagalka hoos dhoofinta in. Laga soo bilaabo dhoofinta in ay hoos-hoos liiska, dooro "Dhoofinta in My Computer". Raadi drive dibadda adag aad ku xirnayn your computer iyo badbaadin playlists kuwaas oo ku yaal. Magaca playlist ninba wuxuu noqon doonaa magaca folder taas oo ka kooban heeso.
Waa maxay sababta aan kala soo bixi TunesGo si ay u gudbiyaan playlists Lugood in drive dibadda adag tahay gurmad? Waa mid aad u fudud. Marka aan sidaa yeelno, aad marna ka walwalin doonaa oo ku saabsan badiyay playlists in Lugood.